Barcelona oo barbaro la dhaafi weysay kooxda Eibar, kulankeeda ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga + SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 19 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dhowr kulan kahor si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa barbaro la dhaafi weysay dhigeeda Eibar, kulankooda ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Blaugrana oo marti ugu ahayd kooxda Eibar Ipurua Municipal Stadium ayay ku adkaatay inay guul kala soo laabato, waxayna labada kooxood ugu dambeyntii ku kala baxeen barbaro 2-2
Qeybta hore ee ciyaarta ayey labada kooxood ku kala nesteen barbaro 2-2 ah.
Daqiiqadii 20-aad ee qeybta hore ciyaarta kooxda Eibar oo gareenkeeda lagu ciyaarayay ayaa gool kaga naxsatay Barcelona, waxaana ciyaarta 1-0 ka dhigay laacibkooda Marc Cucurella, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Sergi Enrich.
Laakiin Barcelona ayan waxba ku qaadan inay la timaado goolka barbaraha waxaana daqiiqadii 31-aad ee ciyaarta u dhaliyay Lionel Messi oo caawinta goolkan ka helay xidiga reer Chile ee Arturo Vidal, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 1-1 ah.
Lionel Messi ayaa markale gaaray shabaqa kooxda Eibar, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1, waxaana markan goolkan ka caawiyay Ivan Rakitic.
Laakiin dhamaadka qeybta koowaad ee ciyaarta, gaar ahaan daqiiqadii 45-aad, kooxda Eibar ayaa la timid goolka barbaraha, waxaana ciyaarta 2-2 ka dhigay laacibkooda Pablo De Blasis.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad, labada kooxood ayaa waxay sameeyeen isku dayo ay goolal ku dhalin gaareen, waxayna soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 2-2 ah ay kooxaha Barcelona iyo Eibar ay isku dhaafi waayeen, Barca ayaa xili ciyaareedkan kaga dhameysatay horyaalka La Liga 87 dhibcood, 38 kulan ay ka ciyaartay, halka Eibar oo la timid 47 dhibcood ay ku dhameysatay booska 12-aad.
“Xilli ciyaareed xun marna ma bedeli doono Real Madrid” – Marcelo oo hadlay kaddib guuldaradii Real Betis